Kufarira Kwazvo muCybertruck, Yakaunzwa naElon Musk | RayHaber
mushaTHE WORLDAMERICAKufarira kwakanyanya muCybertruck naElon Musk
26 / 11 / 2019 AMERICA, THE WORLD, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, VIDEO
tesla pickup modicburberti akaunzwa
Gadzira magetsi emagetsi eAmerican Tesla akaunza yaro nyowani nyowani Cybertruck pickup rori vhiki rapfuura. Maitiro emota, girazi rakaputswa panguva yekuratidzira yaive chirongwa chezuva rekutanga. Kuwedzera kune ese aya, Elon Musk akazivisa kuti 3 yakagamuchira zviuru zve200 pre-oda pazuva. Kugadzirwa kweCybertruck kwehukuru kunotarisirwa kutanga mukupera kwe2021.
Ne tweet iyo Musk yakagovera neSvondo, takadzidza kuti chiuru pre-mirairo ye200 yakagamuchirwa kubva kuCybertruck. Cybertruck yakaratidza zviri pamutemo kuti yakagamuchira kudiwa kwakakomba nekusvika iyi nhamba yekuraira chete mumazuva e3.
CEO waTesla Elon Musk akaita yekutanga kuenzanisira yemagetsi pikicha yemifananidzo yaanga avimbisa kuburitsa. Iyo yekumberi yekugadzira dhizaini Cybertruck inotaridzika kunge mota yakavezwa. Munguva yekuratidzira, yakayedzwa zvakare kuti irambe yakasimba. Pane iyo nhanho, mukuru waTesla Mugadziri, Franz von Holzhausen, akatanga kurova Cybertruck nepikicha yemagetsi ine sledgehammer. Hapana kukuvara kwakasara mushure mekukanganiswa pamabasa ekuvaka mota.
Nekudaro, zvimiro zvemhepo zvakaputswa panguva yekugadzirwa uye kusimudzirwa kwemotokari zvichiri pakati pekugoveranwa kwemotokari zvakanyanya paInternet. Kunyangwe windows haana kupaza zvachose, akapunzika. Yakatsanangurwa kuti mahwindo emota iyi yakasimbisirwa aisaputswa. Musk haana kumirira mhinduro iyi, akati girazi harifanirwe kutyorwa uye bvunzo dzakatadza.
Kune Cybertruck pre-order vatengi vanofanirwa kubhadhara dhipoziti yemadhora e100. Mwaka wekugadzira mota iri 2021. Musk akagovana pasocial media kuti iyo 146 zviuru muzana ye pre-Order 42 ndeye mapatya-enjini Cybertruck, 41 iri-tri-injini uye 17 ndeimwe-injini. Cybertruck 39 zviuru 900 mitengo inotangira kubva pamadhora. Shanduro yepamusoro yemotokari yepamusoro ndeye 69 zviuru 900 madhora. Iyo 40 zviuru-dhora-dhora rimwe chete injini yekutanga ine 400 km rehu.
Iyo 500 ine maviri-injini uye mana-mota-dhiraivhu inopa mhando padyo ne km, uye 50 inogona kutengwa neturu remadhora emutengo. Iyo yakakwira 800 mileage range 3 mota uye mana-mavhiri drive shanduro yemutengo we70 zviuru zvemadhora akati. Iyo 500 ine maviri-injini uye mana-mota-dhiraivhu inopa mhando padyo ne km, uye 50 inogona kutengwa neturu remadhora emutengo. Iyo yakakwira 800 mileage range 3 mota uye mana-mavhiri drive shanduro yemutengo we70 zviuru zvemadhora akati. Kuwedzerwa kweiyi shanduro kubva ku0 kuenda ku100 km inongova 2.9 masekondi. Ivo vanoda kuva neiyo yepamusoro vhezheni vachamirira rimwe gore.
Tesla anozosarudza sarudzo yekuzvitakura yakazvimiririra kune ese mifananidzo mifananidzo. Ivo vanoda kuzvimiririra vachityaira 7 vachabhadhara mari inodarika chiuru. Mune mharidzo yake, Tesla CEO akarangarira kuti matatu emhando yepamusoro yekutengesa muUS mapikicha.
Ride Elon Musk's Ultra-Fast Hyperloop Chete ye1 Dollars
3 kubva kuElon Musk. Chinhu chakakosha chekuendesa ndege!
Kufarira Kwazvo Nguva
Interest Intense In Haydarpaşa Book Days
TCDD pa2 R & D Innovation Summit uye Chiratidziro…
Kufarira zvakanyanya muchero weTÜDEMSAŞ paSivas Values ​​Fair
Kufarira Kwakanyanya Antalya Mirairo muQatar
Interest Intense From The Big Firms
Kubva kuVhiki Rokutanga kuenda kuKutamisa kweBhavhari Pakati pe Ankarakarts…
Locman Firimu Rinokosha Screening Demir
Nharaunda yakanyanya kuZonguldak-Karabuk Train Flights
Istanbul New Airport Commerce Nzvimbo Yoğun
Kufarira kwakanyanya TCDD Mira paInnoTrans
TCDD 3. Kufarira kwakanyanya "Atatürk Wagon" munharaunda
Nhasi muNhoroondo: 27 November 1892